ioyile yokuthambisa ityhubhu yobhedu
KULULA UKUFAKELWA NGE-3 HOLE 4 I-Inch CENTERSET : Umqheba omnye wamagumbi okuhlambela ulungele ufakelo oluqhelekileyo lwe-4-Intshi. Itephu yeClassic iza nentonga yokuphakamisa kunye nesivalo esiphumayo. Izinto eziphathekayo ze-faucet yokuhlambela enye: i-zinc alloy / insimbi engagqwali; Umphezulu: I-nickel ebrashiweyo kunye nokuprintwa kweminwe simahla kunokuxhathisa umhlwa.
ULULA ULAWULO LOBUSHUSHU LWAMANZI : Umqheba wetephu ye-sink kulula kakhulu ukuhambisa umva-kunye-phezulu phezulu-phantsi. Kulula ukulawula umthamo wamanzi kunye nobushushu bamanzi. Ukukhawuleza, isixhobo sokufakela i-lavatory faucet yasimahla, i-intshi eyi-1.2 ubuninzi bokunyuka ubunzulu.
ICANDELO LOKUSETYENZISWA KWEENDLU EZIQHUTYWA: Itephu yokuhlambela ebrashi yenickel iza ne-metal drain assembly, amanzi aphuma kwi-faucet sinki ngokucinezela intonga yokuphakamisa, ukuphepha ukukrazula izandla zakho ezihlanjiweyo. Iintambo zoBonelelo zithengiswa ngokwahlukeneyo
IXABISO ELIGQIBILEYO LEMALI: Umngxuma wokuhlambela we-3 umngxuma unefashoni yoyilo lwe-retro yakudala. Idekhi exhonywe impompo engenamsebenzi ilingana nendlu erentwayo, i-condo entsha, igumbi elinye, ikhaya lemoto, itreyila yokuhamba kunye nokusetyenziswa kosapho.
UMGANGATHO OPHAKAMILEYO NEWARANTY YEMINYAKA emi-5: I-aerator ye-ABS yonga i-50% yamanzi kunye ne-anti-splatter, enokuthi ithathwe phantsi ngokuthe ngqo ngezandla zakho ukucoca (akukho zixhobo ezifunekayo). Ithontsi yasimahla ikhatriji yeceramic inyamezela. Nceda uqhagamshelane nathi ukuba kukho nayiphi na imibuzo.
I-SKU: 2320700RB iindidi: Ukuhlamba igumbi lokuhlambela, Ukucofa igumbi lokuhlambela kwigumbi lokuhlambela elifanayo tags: chitha indibano, Ibronze yeBhotile yeoyile